Ahiara Diocese: Okpalaeke etinyela akwụkwọ arụkwaghịm - BBC News Ìgbò
Ahiara Diocese: Okpalaeke etinyela akwụkwọ arụkwaghịm
20 Febụwarị 2018
Pope Francis anabatala akwụkwọ arụkwaghịm Bishop Okpaleke tinyere
Bishop Peter Okpaleke nke Ahiara Catholic Diocese etinyela akwụkwọ arụkwaghịm, ebe Monsignor Lucius Iwejuru Ugorji ga-anọchi ya dịka onye ga na-achị diocese obere oge.
Akwụkwọ arụkwaghịm a na-abia ka ọnwa ole na ole gachara mgbe Vatican ji nye iwu ka ndị ụkọchukwu nke Diocese Ahiara họrọ ịnabata Okpalaeke dịka Bishọp maọbụ ịhapụ ọrụ ha dịka ndị ụkọchụkwụ Katọlik.
A na-atụ uche na mkpebi Vatican nwere banyere ikwunye ka ndị mmadụ jụ ụkọchụkwụ ha-achọghị ga-ebute ọgbaghara ebe ndị ọzọ ụka Katolic gbanyere mgbọrọgwụ.
Ụka Anglịkan: Kwụsị njem ahụike
'Gbagharanụ arụ na-eme n'ụlọ ụka' - Pope Francis
'Buhari gbara nkiti ihe na-emebi'
Na mkparitaụka ya na onye ntakụkọ BBC nwere, otu ụkọchụkwụ Katolik ọnụ na-eru n'okwu bụ Monsignor Bernard Okodua, kwetara na ọ bụ eziokwu.
Okodua onye bụ Dean Mainland Deanery nke Catholic Archidiocese nke Lagos sị: "Anyị nụrụ na Bishop Okpaleke tinyere akwụkwọ arụkwaghịm na nzukọ ndi Bishọp Naijirịa nke na-aga n'ihu ugbua. Anyị amaghị ihe ga-eso akwụkwọ ahụ o tinyere. Anyị na-eche ka anyị mara ihe ndị bishọp na-eme nzukọ ga-ekwụ maka ya."
Ebe foto si, Catholic Bishops Conference
Ndị ụkọchukwu ndị Catọlik na-anata okike site na Rome
Pope ochie bụ Pope Benedict XVI bụ onye họpụtara Okpaleke dịka Katolik Bishop nke Ahiara Diocese na afọ 2012, mana ndị ụkọchukwu nọ na mpaghara ahụ jụrụ ya ma kpalite ọgbaghara megide ya.
Ndị Ahiara Catholic Diocese ndị bụ ndị mpaghara Mbaise jụrụ ịnabata Okpaleke onye bụ onye Anambra steeti n'ihi na ọ bụghị onye be ha, ha gara n'ihu gbachie ụlọ kathedral ebe ekwesịrị ichi ya bishop nke mere ka anọrọ ebe ọzọ mee emume ahụ.
Kamgbe ahụ tigbuo-zogbuo so esemokwu ahụ ekeweghị ka ụkọchụkwụ ahụ rụọ ọrụ ya nke wetara iwu ahụ enyere ka ụkọchukwu niile tinye aka n'akwụkwọ kwe nkwa irubere Okpaleke isi maọbụ kwụsị ọrụ dịka ụkọchukwu.
Nwunye Nnamdi Kanu: Amaghị m ebe di m nọ
Soyinka: Ndị okenye kwesiri ị ga zuo ike
Iceland amachiela ibe nwoke ugwu
Ndi na-edebenye aha maka PVC n'afọ a ha aka afọ ndị ọzọ?
Ihe mere m ji yiri uwe ụkọchụkwu gaa ụlọikpe n'Anambara- Ọkaiwu Abuchi Ogbachalụ
Organ Harvest: Ụlọikpe Naịjirịa enyela NIMC iwu ka ha nyefee Ekweremadu ya 'data' nwata ahụ
Tọhapụnụ Nnamdi Kanu- Ortom